December 2012 ~ Nyi Nay Min (Reshare IT knowledge)
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com. Saturday, December 22, 2012
Video Format တွေကနေ JPG, BMP, TGA, TIFF, PNG, etc. အစရှိတဲ့ Photo Format တွေကို ပြောင်းပေးတဲ့ converter ပါ. လိုချင်တဲ့ သူများ အောက်မှာ Download လုပ်ယူလိုက်ပါ။
Key = 9027EBEAF5C724F0F4F7 Read More
Trojan Removaler latest version ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ လိုချင်တဲ့သူများ အောက်မှာ Download လုပ်လိုက်ပါ။ အဆင်ပြေ မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ Mediafire | Sharebeast | Filecloud
အကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လေ့လာချင်တဲ့သူများ၊ စိတ်ဝင်စားတဲ့သူများ အတွက်ကတော့ တန်ဖိုးဖြတ်မရတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ပါ. ဆရာ ဦးဇော်လင်း ရေးထားတာပါ.
networking နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိသင့်တာနှင့် လက်တွေ့အသုံးချပုံတွေကို အသေးစိတ်ကျကျ ရှင်းပြထားပါတယ်. မ၀ယ်နိုင်သူများနှင့် နယ်ဝေးရောက်နေတဲ့ သူများအတွက် အဆင်ပြေနိုင် လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်. Filecloud | Sharebeast | mediafire (or) Mediafire | Ziddu Read More
အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါ လေ့လာချင်သူများအတွက် ဆရာဦးသိန်းလွင်ရဲ့ အခြေခံ အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါ စာအုပ် နှစ်အုပ်ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ စာအုပ်တွေကို ကိုကီးဆီကနေ ရလာတာပါ။ စိတ်ဝင်စားသူများ အောက်တွင် Download လုပ်ယူလိုက်ပါ။ အဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ Part 1 => Mediafire (or) Mediafire | Filecloud | Sharebeast | Minus
Part2=> Mediafire (or) Mediafire | Filecloud | Sharebeast | Minus Read More
mp3 mp4 လုပ်ဆောင်ချက်နှင့်ပြဿနာဖြေရှင်းနည်း (မြန်မာလို)
ဒါကတော့ mp3, mp4 တွေကို အသုံးချနည်းနှင့် ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းနိုင်မယ့် နည်းလမ်းလေးတွေကို ဖော်ပြရေး သားထားတာပါ . mp3 mp4
ကိုင်နေတဲ့ သူများအတွက်တော့ ဖတ်ထားသင့်တာပေါ့ မဟုတ်ဘူးလား . ကျွန်တော်ကတော့ သိပ်မသုံးဖြစ်ဘူး . ခုရေးထားတာ မြန်မာလိုနော် . သေချာနား လည်အောင် ဖတ်ပေးပါ ။ ခဏခဏ မေးနေကြလို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ။
Mediafire | Minus | Filecloud | Sharebeast Read More
ဂရပ်ဖစ်ဖြင့် အနုပညာမြောက်အောင် ဒီဇိုင်းဆွဲပြီး ပုံဖော်ရသော အလုပ်ကို ၀ါသနာပါသော မည်သူမဆို လေ့လာသင့်ပါသည်။ ယခုစာအုပ်ကို ဖတ်ခြင်းဖြင့် အလင်းအမှောင်၏ သဘောတရား ၊ အနုပညာရသမြောက်သည့် ဂရပ်ဖစ်ပုံရိပ်များအား ဖန်တီးတတ်စေလာနိုင်ရန်အတွက် အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိလာနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ လေ့လာချင်သူများ အောက်တွင် Download လုပ်ပါ။
Mediafire | Minus | Filecloud | Sharebeast
Autodesk 3D Max အသုံးပြုနည်း (မြန်မာလို)
ကဲ 3D သမားများအတွက် Autodesk 3D Max အသုံးပြုနည်း စာအုပ်ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ 2D 3D စိတ်ဝင်စားသူများ ဖတ်ရှု့လေ့လာ နိုင်ပါတယ်။ လိုချင်တဲ့သူများ အောက်မှာ Download လုပ်ယူလိုက်ပါ။ Download လုပ်တဲ့အခါ link တစ်ခုက မရရင် တစ်ခြားတစ်ခုကနေ Download လုပ်ပါ။ အားလုံးကို Download လုပ်ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲ့ထဲကနေ ကို Download လုပ်ရတာ အဆင်အပြေဆုံး တစ်ခုကို ရွေးပြီး Download လုပ်ပါ။
Adobe Illustrator အဓိကသော့ချက်များ (မြန်မာလို)
မင်းသန့်အောင် ရေးထားတဲ့ Adobe Illustrator ၏ အဓိကသော့ချက်များ ဆိုသည့် စာအုပ်ကို Illustrator သမားများအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ လိုချင်သည့်သူများ မိမိအဆင်ပြေသည့် link မှ Download လုပ်ယူကြပါ။ အစက software တွေ တင်ပေးမလို့ဟာ စာအုပ်တွေကို လူပြောများလို့ စာအုပ်တွေကို အရင်ဦးဆုံး တင်ပေးလိုက်တာပါ။ ဆိုက်ထဲလဲ အခုမှ ၀င်လို့ရလို့ပါ။ နောက်ထပ် တင်ပေးစရာတွေ အများကြီး ရှိပါသေးတယ်။ Mediafire | Minus | Filecloud | Sharebeast
Virtual dj pro7E-Book (မြန်မာလို)
DJ သမားများအတွက် ကိုဝင်းဟိန်းရေးထားတဲ့ virtual dj pro7ပါ။ software ကိုတော့ ကျနော် အရင်က တင်ပေးထားပြီးပြီ ထင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ မတင်ထားရသေးဘူး ဆိုရင်လည်း မနက်ဖြန်ကျရင် တင်ပေးပါ့မယ်။ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြလိမ့်မယ် လို့လည်း မျှော်လင့်ပါတယ်။ အဆင်ပြေတဲ့ link ကနေသာ Download လုပ်ကြဗျာ။ password တောင်းခဲ့ရင်တော့ konyinaymin@gmail.com ကို ထည့်လိုက်ပါ။ sharebeast မှာ password ခံထားလို့ပါ။
Illustrator အသုံးပြုနည်း (မြန်မာလို)
ကဲ ပုံဆွဲသမားတွေအတွက် Illustrator cs2 စာအုပ်ကို တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။ Illustrator crazy သမားများလဲ ရှိလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့် ပါတယ် အဲ့ဒါကြောင့် တင်ပေးလိုက်တာပါ။ အားလုံးလဲ အဆင်ပြေမယ် လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ အဆင်ပြေတဲ့ link ကနေ Download လုပ်ကြပါ။ လိုချင်ရင် အောက်မှာယူလိုက်ပါ။
Skype အသုံးပြုနည်း (မြန်မာလို)
စုကြည်ထွေး ရေးထားတဲ့ Skype အသုံးပြုနည်း လမ်းညွှန်စာအုပ်ပါ။ Skype သမားများအတွက် တင်ပေးလိုက် ပါတယ်။ အရင်တခါကလည်း ဘယ်သူလည်း မသိဘူး တောင်းထားပါတယ်။ လိုချင်သည့်သူများ အောက်မှာ Download လုပ်လိုက်ပါ။ File တွေက ခဏခဏ link သေလို့ ၄ နေရာကနေ တင်ပေးလိုက် ပါတယ်။ အဆင်ပြေတဲ့ link ကနေသာ Download ဆွဲပါ။ Download Mediafire | Filecloud | Minus | Sharebeast
pc computer management - မျိုးသူရ
ဒီစာအုပ်ကလေးကတော့ ကိုမျိုးသူရ ရေးတဲ့ PC ကွန်ပျူတာ Management ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကလေးပါ။ ဒီစာအုပ်ထဲမှာ ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးကို ဘယ်လိုမျိုး ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရမယ်ဆိုတာကို ရေးသားဖော်ပြထားပြီး software တော်တော်များများကို ဘယ် software ကို ဘယ်လို အသုံးပြု ရမည် ဆိုတာကို software တော်တော်များများကို ဥပမာထားကာ သေချာ ရှင်းပြထားပါတယ်။ အဲ့ဒီ့ software တော်တော်များများသည် ကွန်ပျူတာတစ်လုံး အတွက် မသိမဖြစ် သိထားသင့်သည့် software များဖြစ်ပါတယ်။ လိုချင်သည့် သူများ အောက်မှာ Download လုပ်လိုက်ပါ။
စာအုပ်တွေကို အကုန်လုံး အစကနေ ပြန်တင်ပေးပါ့မယ်။ လိုချင် သူများ စောင့်ပြီး Download လုပ်စေချင်ပါတယ်။ အရင်က တင်ပေးခဲ့ပြီးပါပြီ . ဒါပေမယ့် လင့်သေနေတယ်ဆိုပြီး စာရောက် လာလို့ ပြန်ပြီးတော့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်. Download လုပ်မရသေးဘူးများ Download လုပ်လိုက်ပါ. အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်. ဘယ်နေရာကနေပဲ Download လုပ်လုပ် ရတဲ့နေရာကသာ Download လုပ်ပါ. Adobe photoshop cs4 ကို သုံးပုံသုံးနည်းတွေ ပါပါတယ်။ Sharebeast | One2up
BigasoftTotal Video Converter 3.6.24.4526
အားလုံးပဲ ကျနော် ၀ဘ်ဆိုက်ကို ပစ်ထားသလို ဖြစ်မိသွားတဲ့အတွက် အနူးအညွတ်တောင်းပန် ချင်ပါတယ်။ အခုတော့ အရင်က တင်ထားပေးတဲ့ converter တွေက လင့်သေနေတာကော စာအုပ်တွေကို တင်ပေးချင် တာကြောင့်မို့ ဒီနေ့မှာ စာအုပ်တွေနှင့် software တစ်ချို့ကို တင်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ mobile phone, mp4 player, personal computer, television, YouTube ထဲကို ထည့်ဖို့အတွက် ကော ဖုန်းထဲကို ထည့်ဖို့အတွက်ပါ convert လုပ်ပေးနိုင်ပါ တယ်။ တော်တော်လေး ကောင်းပါတယ်။ ဒီ software ကတော့ converter တွေထဲမှာ ကျနော်ကြိုက်တဲ့ Bigsofttotal video converter ပါ. လိုချင်ရင် အောက်မှာ Download လုပ်လိုက်ပါ။ Download Mediafire | Download Filecloud | Download sharebeast
Passowrd = konyinaymin@gmail.com Read More
လုံခြုံစိတ်ချစွာ Facebook အသုံးပြုခြင်း (မြန်မာလို...